Faritan’ny governemantan’i Hong Kong ho “fampihorohoroana ataon’amboahaolo mandeha irery” ny fanafihana polisy · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny polisy fa fanohanana fampihorohoroana ihany ilay fanehoan'endrika fisaonana
Voadika ny 14 Aogositra 2021 4:55 GMT
Nisy ireo Hongkongers sasantsasany nametraka voninkazo fotsy teo akaikin'ny toerana nisian'ny fanafihana ho fisaonana ny fahafatesan'i Leung. Sary nahazoana alalana.
1 jolay 2021, tsingerintaona fahazato nijoroan'ny Antoko Komonista Shinoa sy tsingerintaona faha-24 nanolorana indray ny fiandrianam-pirenena ho an'i Shina, niafara tamin'alahelo tamin'ny fanatsatohana antsy polisy iray tao Hong Kong. Nanatsatoka antsy polisy iray avy ao an-damosina tamin'ny folo ora alina tao Causeway Bay i Leung Kin Fai, dimampolo taona.
Nampidirina hopitaly ilay polisy naratra, 28 taona, ary efa tsy dia maninona intsony taorian'ny fandidiana azy. Etsy ankilan'izany dia nanatsatoka antsy ny tratrany ihany koa ilay nanafika ary maty tao amin'ny hopitaly.
Nofariparitan'ilay vao nasondrotra ho Sekreteran'ny Filaminana Chris Tang ho ‘asa fampihorohoroana ao an-toerana ataon'amboahaolo mandeha irery‘ ity tranga ity ary nolazainy fa norangitina tamin'ny alalan'ny kabarim-pankahalana ilay lehilahy. Misy ireo miahiahy fa mampiakatra tsikelikely ny politikam-pamoretana ao an-tanàna izao fomba filazan-javatra izao. Anisan'ireo voalohany naneho izany ahiahy izany i Edward Chan, mpianatra mandrato ny Ph.D. :
Tsy misy maniry ny tahaka izao hitranga.
Nofaritan'ny polisin'i Hong Kong ho “fampihorohoroana ataon'olo-tokana” ity tranga ity. Saingy, raha izany, iza no nakany aingam-panahy? Ary moa ve tsy mahatonga an'i HK ho toerana azo antoka kokoa ny NSL?
Ny ahiahiko dia: 1.famoretana bebe kokoa; 2. maka tahaka ny olona
Noraràn'ny manampahefana ao amin'ny polisy fanindroany misesy ny famoriam-bahoaka 1 jolay amin'ny lazaina ho noho ny fifehezana ny valan'aretina. Hatramin'ny taona 1997, fotoana ho an'ny olom-pirenena izao lanonana isa-taona izao hanehoany ny alahelony amin'ny politikan'ny governemanta.
Mba tsy hisian'ny famorivorian'olona, nampiely ny olony an'arivony manerana ny nosy Hong Kong any amin'ireo toerana be mpivezivezy ny polisy. Iray amin'ny distrika nahitana polisy betsaka indrindra i Causeway Bay.
Taty aoriana nasehon'ny seha-baovao tao an-toerana fa miasa i Leung ary monina miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Namela taratasy famonoan-tena izy izay nitsikerany ny Lalànan'ny Filaminam-Pirenena (NSL) sy ny fihoaram-pahefana nataon'ny sampan-draharahan'ny polisy nandritra sy taorian'ny famoretana ny hetsika fanoherana ny fampodiana olona ho any Shina, ary mpanao fihetsiketsehana an-jatony no naratra, nosamborina, ary nampangaina tamin'ny heloka mavesatra tahaka ny fanafihana polisy, firotahana, fandrisihana hirotaka, fisarahana amin'ny fanjakana sns..
Tao amin'ny media sosialy, nofariparitan'ireo olom-pirenena manohana ny demaokrasia i Leung ho ‘lehilahy mitady ny rariny’ (義士）na ‘olo-mahery nanao sorona ny tenany'（烈士）ary olom-pirenena maromaro no nandeha tao Causeway Bay hisaona ny fahafatesan'i Leung:
Nijoro tamim-pahanginana ny olom-pirenena ary niezaka ny hametraka voninkazo fotsy teo amin'ny toerana nahafatesan'i Leung rehefa nanatsatoka antsy ny tenany teo amin'ny tratra izy, saingy nametrahan'ny polisy tady tsy ho azo ihoarana ny toerana ary namoahana tapakila amin'ny fandotoana sy fanitsakitsahana ny fepetran'ny Covid. Fa mbola nametraka voninkazo tany amin'ireo toerana manodidina ihany ny olompirenena.
Namoaka fanambaràna ny manampahefana tao amin'ny polisy mametraka fa ny fisaonana an'i Leung dia ‘tsy misy hafa amin'ny fanohanana ny fampihorohoroana’ ary nosoritany fa mbola hampanao famotorana lalindalina kokoa amin'ity raharaha ity ny manampahefana ao amin'ny polisin'ny filaminam-pirenena:
Handrisika fankahalana bebe kokoa izany, hampisara-bazana ny fiaraha-monina ary mety hanimba ny firindram-piaraha-monina sy hampidi-doza ny filaminam-bahoaka, mandrahona ny rehetra ao Hong Kong… Tokony hisaina ny vahoaka, hanavaka ny zavamisy amin'ny anganongano ary tsy tokony hizaka na hanandratra herisetra. Tsy tokony avelantsika ny fandisoam-baovao hitarika ny taranaka manaraka amin'ny lalan-diso na ny ratsiratsy kokoa ho lasa mpampihorohoro.
Toa te-hilaza mihitsy aza ilay vao nasondrotra ho sekretera sefo John Lee tao amin'ny ranty bilaoginy fa ny fihetsika fisaonana dia mety ho azo adika ho fandrisihana na fisoloam-bava amin'ny fampihorohoroana. Nasongadin'ny mpanao gazety mahaleotena Aron Nicholas tao amin'ny Twitter ny fanehoan-kevitr'i Lee:
Nilaza i John Lee “hitany ny olona anjotra mandrisika fanohanana ho an'ilay mpamono olona nitady hamono polisy… ao anatin'izany ilay lazaina ho fisaonana sy fametrahana voninkazo.”
Na izany aza, miahiahy ireo manampahaizana manokana amin'ny raharaham-pamonoana olona fa ny marika ‘mpampihorohoro amboahaolo mandeha irery’ dia vao maika mety hampifandrafy kokoa ireo Hongkongers prô-demaokraty amin'ny polisy. Ahiana io marika io ‘hamorona olana mamahan-tena’, araka an'i Raffaello Pantucci, manampahaizana manokana amin'ny raharaham-pampihorohoroana.
Maro, tahaka ilay mpanao gazety mahaleotena Rich Scotford, no manahy fa ny marika mpampihorohoro no mety hitarika ny fampidirana ny endrika famoretana ao Xinjiang ho ampiharina ao Hong Kong:
Polisy HK – mpampihorohoro ianao, ary mpampihorohoro ianao, ary mpampihorohoro ianao! izay rehetra tsy manohana anay dia mpampihorohoro! Naoty: Izay raha tsorina ny politika Xinjiang ampiharina amin'i HK.
Mihoatra ny iray tapitrisa ny Uyghurs nohazonina an-tondromolotra any amin'ny toby fanarenana ao amin'ny faritr'i Xinjiang ao Shina hatramin'ny taona 2018. Etsy ankilan'izany ny manampahefana shinoa, manamarina ny politika (amboaran-dalàna) ho fepetra mahomby iadiana amin'ny fampihorohoroana sy ny ekstremisma.
Tsy hoe tsy misy fototra izany fitsinjovan-davitra amin'ny fihenjanan'ny fepetra izany, tamin'ny 4 jolay, ny manampahefana ao amin'ny polisy nisambotra vehivavy 20 taona sy lehilahy 26 taona noho ny famoahany ranty mirehidrehitra tao amin'ny media sosialy. Lazaina ireo hafatra fa mandrisika ny hafa hamono polisy sy handoro ny trano sy toeram-piasan'ny polisy. Tsy nolazain'ny polisy kosa anefa, na izany aza, hoe inona marina no tena voasoratra tao amin'ny hafatra.